Home Wararka Amisom oo la sheegay in xad-gudubyo galmo oo ka waddo xarunta Xalane...
Amisom oo la sheegay in xad-gudubyo galmo oo ka waddo xarunta Xalane (Galka Baarista VOA)
Sarkaal ka tirsan xafiiska QM ee UNSOS ayaa Amisom ku eedeysay inay xadgudubyo galmo ka gaysato xerada OPD oo ku dhex-taalla xarunta Xalane ee Muqdisho, oo la sheegay in gabdhaha Soomaalida ah lagu kufsado.
Bishii August ee sannadkan ayaa warqad ay qortay sarkaalkan sare oo ka tirsan UNSOS oo taakulaysa ciidamada AMISOM waxay ku sheegtay xadgudubyo iyo ka faa’iidaysi dhinaca galmada ay ku lug leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ajaanib kale.
Waxay warqaddeeda ku sheegtay ay ka dhaceen degaan lagu magacaabo OPD oo ay ku nool yihiin dad rayid ah oo Soomaali ah. Degaankaas ayaa ku yaal xerada Xalane.
Eedahaas AMISOM way beenisay dhammaantood, dhinacyada soo jeediyeyna masoo bandhigin wax caddaymo ah.
Hase yeeshee Galka Baarista waxa uu ogaaday in horey loogu heshiiyey in gebi ahaanba xeradaasi la xiro lagana gooyo AMISOM sannad ka hor.
Haddaba sannad kadib markii heshiiskaasi la gaadhay waxba kama hirgelin dhammaan qodobada lagu heshiiyey. Xerada OPD lama xirin, weliba waxaa gala ciidamada AMISOM, sidoo kale way ka go’an tahay degmada Wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay, waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka AMISOM.
Previous articlexubno diiday iney kamid noqdaan Gudigii uu Magacaabay Madaxweyne ku-xigeenka Puntland
Next articleSOMALIS Join Big Four Tribes, Muslims Are More than Kalenjins, Joho got numbers than Ruto
Dowlada Kenya oo shaacisay in qof ka yimid Somalia laga helay...
(Daawo) Gud. Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo eedeeyay madaxweyne Farmaajo